လိင်စွဲလမ်းမှုကိုဝေဖန်သူများမေးခွန်းက Stefanie Carnes PhD, LMFT မှသင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်
အဆိုပါမေးခွန်းလိင်စွဲဝေဖန်သင်, Stefanie Carnes ပါရဂူဘွဲ့အသုံးပြုပုံ LMFT မေးပါစေချင်မနေပါနဲ့
မူရင်းဆောင်းပါး။ မကြာသေးမီလများအတွင်း Clinician ၏သေးငယ်တဲ့ကေဒါအားလုံးလိင်စွဲကုသမှုအထူးကုမလိုအပ်ဘဲသူတို့ရဲ့ client များ '' အပြုအမူတွေ pathologize သူကို moralistic, Ultra-ရှေးရိုးစွဲ, ကျဉ်းမြောင်းတဲ့စိတ်ကုသဖြစ်ကြောင်း။ အများအားဖြင့်ငြင်းခုံခြင်း, လိင်စွဲကုသမှုလယ်ကိုဆန့်ကျင်ကာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောဝေဖန်မှုများညှိပြီးထားပါတယ် အဘယ်ကြောင့်ဤအဝေဖန်သူများကဤလမ်းအတွက်လိင်စွဲကုသမှု Clinician တိုကျခိုကျဖို့ရှေးခယျြရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူး။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သူတို့ကပိုမိုလွယ်ကူနှစ်ဦးစလုံးဖြစ်သည့်အကြောင်းကြည့်ရှုကြောင်းသိပ္ပံနည်းကျသုတေသနများကြီးထွားလာခန္ဓာကိုယ်အပေါ်သို့မှတ်ချက်ပေးရန်ထက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲကုသသည့်ဆရာတိုက်ခိုက်ရန်ရှာလိင်အချို့လူများအတွက်, တူညီတဲ့လမ်းကြောင်းမူးယစ်ဆေး, အရက်ထဲမှာစွဲလမ်းစေနိုင်ပါတယ်သောစိတ်ကူးထောက်ခံပါသည် , စီးကရက်, လောင်းကစားနှင့်အခြားပျော်မွေ့-inducing တ္ထုများနှင့်အပြုအမူစွဲလမ်းစေနိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါရိုးရှင်းသောအဖြစ်မှန်အားလုံးကမ္ဘာလုံးကျော်အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်သည်အခြားစွဲ (များသောအားဖြင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအချိုးဖောက်ဆုံး) နဲ့ဖြစ်ပေါ်အရာကိုသူတို့အားတုံ့ပြန်မှုများနှင့်တုံ့ပြန်မှုနှိုင်းယှဉ်, လိင်စွဲများ၏လုပ်ရပ်များနှင့်ဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှုလေ့လာနေသည်ဟုဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအခါရလဒ်များသည်တာတော့သေချာတယ်နေသောခေါင်းစဉ်: လိင်စွဲလမ်းကိုအခြားစွဲလမ်းအဖြစ်အများကြီးအတူတူပင်လမ်းမှာရှိတဲ့ဦးနှောက်ထဲမှာတငျပွ - တစ်ခုတည်းသောစစ်မှန်ခြားနားချက်ရွေးချယ်မှု၏ပစ္စည်းဥစ္စာ / အပြုအမူဖြစ်ခြင်း။
ဒေါက်တာ Valerie Voon (ကိန်းဘရစ်တက္ကသိုလ်ကကောက်ယူ - ဥပမာ, Ji-ဝူး Seok နှင့်တောင်ကိုရီးယားတွင် Chungnam အမျိုးသားတက္ကသိုလ်မှာဦးနှောက်သုတေသနအင်စတီကျု၏ Jin-ဟွန် Sohn မကြာသေးမီကအစောပိုင်းကလိင်စွဲလေ့လာမှုများ၏တွေ့ရှိချက်မှုနဲ့အပြိုင်ကြောင်းလိင်စွဲသုတေသနထုတ်ဝေ ဗြိတိန်) နှင့်မြင့်မားမှတ်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေရဲ့ array - အာရုံကိုဘက်လိုက်မှုနှင့်အာရုံကြောတုံ့ပြန်မှုပေါ်မှာ။ Paula BANCA (Coimbra, ပေါ်တူဂီတက္ကသိုလ်) ကဦးဆောင်သည်အခြားမကြာသေးမီလိင်စွဲသုတေသနလိင်နှင့်အသစ်အဆန်းအဘို့အညစ်ညမ်းစွဲ '' preference ကိုကြည့်ပါတယ်။
လိင်စွဲတူညီတဲ့အခြေခံနည်းလမ်းနှင့်အခြားစွဲကဲ့သို့တူညီသောအခြေခံဒီဂရီမှဒါလုပ်နေတာ, စွဲ related တွေကိုအပေါ် (ဆိုလိုသည်မှာ, ညစ်ညမ်း) မိမိတို့၏အာရုံကိုတစ်ဦးပိုမိုမြင့်မား-ထက်သာမန်ရှယ်ယာအာရုံစူးစိုက်။
မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆက်နွယ်သည့်လှုံ့ဆော်မှုနှင့်ထိတွေ့သည့်အခါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုထိတွေ့လိင်စွဲများ၏ဦးနှောက်ကိုတုန့်ပြန် (ဆိုလိုသည်မှာ, ညစ်ညမ်း) မူးယစ်ဆေးစွဲ၏ဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှုပြန်ပါသည်။ ဥပမာ, dorsal Orbital prefrontal cortex ကပစ္စည်းဥစ္စာစွဲနှင့်အတူမယ့်အဖြစ်ကိုတက်ထွန်း။ အညီအမျှအရေးကြီးသောဤဒေသတွင်ပစ္စည်းဥစ္စာအချိုးဖောက်ဆုံးနှင့်အတူကဲ့သို့တူညီသော, ကြားနေလှုံ့ဆော်မှုများအတွက်အခြေခံအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောတတ်သောအချက်ဖြစ်ပါသည်။ တစ်နည်းမှာ dorsal Orbital prefrontal cortex လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲအပါအဝင်စွဲမှုပုံစံအားလုံးကိုအတွက်ကြားနေတွေကိုမှတွေကိုနှင့် underreacts addiction မှ overreacts ။
compulsive porn အသုံးပြုသူများသည်ညစ်ညမ်း ( သာ. ကြီး "လို") တပ်မက်ပေမယ့်သူတို့က Non-စွဲထက်ပိုမိုမြင့်မားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ ( သာ. ကြီး "ကဲ့သို့") မရှိကြပါဘူး။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲလမ်းနှင့်အခြားအပြုအမူစှဲကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိဥာဏ်နှင့်တကွပြည့်စုံ alignment ကို၌ရှိကြ၏။
လိင်စွဲနေတဲ့ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုတစ်စုထက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအသစ်အဆန်းတစ်ခု သာ. ကြီးမြတ် preference ကိုရှိသည်။ ထိုကြောင့်, အသုံးပြုမှု (တူညီတဲ့လုပ်ဆောင်မှုနှင့် / သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုပြင်းထန်သောလှုပ်ရှားမှုပို) ကိုအရှိန်ကြောင့်တစ်နည်းစသည်တို့ကိုရက်, မူးယစ်ဆေးစွဲနှင့်အတူမသကဲ့သို့, လိင်စွဲ, ယခင်သုံး habituate နှင့် "ကိုပိုမိုနှင့်ကွဲပြားခြားနားထွက်ရှာအံ့သောငှါ "ရုံကအခြားစွဲလိုပဲ။ (ပုံမှန်အားဖြင့်ဆေးခြောက်များနှင့်ဆေးညွှန်းဆေးပြားများကဲ့သို့အမှုအရာနှင့်အတူထွက် start ပေမယ့်, အချိန်အတွက်, သူတို့ရဲ့လက်မောင်းတစ်ဦးဆေးထိုးအပ်နှင့်အတူတက်အဆုံးသတ်, ဘိန်းဖြူ, စိတ်ကြွဆေး, ဒါမှမဟုတ်တခြားခက်ခဲမူးယစ်ဆေးရိုက်ကူးသူကိုဥပမာ, သွေးကြောသွင်းမူးယစ်ဆေးစွဲစဉျးစားကွညျ့။ )
သူတို့ရဲ့သုတေသနပြုအကြောင်း, Seok နှင့် Sohn ရေး: "အထူးသဖြင့်ဤလေ့လာမှုများကဲ့သို့သောတစ်ခုစွဲလမ်း cue ဖို့သညျ့တိုးလာ sensitivity ကိုအဖြစ်လက္ခဏာတွေအတွက်ရလဒ်များအရာ salience ထည့်သွင်းတွက်ချက်မှုတစ်ခုချွတ်ယွင်း, အဖြစ် [သည့် dorsal Orbital prefrontal cortex] များ၏နှောင့်အယှက် function ကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ကြ ပစ္စည်းဥစ္စာနှင့်အပြုအမူတွေစွဲခြင်းနှင့်ပုံမှန်-ဆုချီးလှုံ့ဆော်မှုစိတ်ဝင်စားလျော့နည်းသွားသည်။ "
Voon နှင့်သူမ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်ရေးရန်: "[လိင်စွဲ] အတွက်ပိုကောင်းအာရုံကိုဘက်လိုက်မှု၏ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်စှဲပုံမမှန်အတွက်မူးယစ်ဆေးတွေကိုလေ့လာမှုတွေအတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာတိုးမြှင်အာရုံကိုဘက်လိုက်မှုနှင့်အတူတတ်နိုင်သမျှထပ်အကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်မူးယစ်ဆေး cue reactivity ကိုအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရကြောင်းအလားတူကွန်ယက်အတွက် [လိင်စွဲ] တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုမှအာရုံကြော reactivity ကို၏မကြာသေးမီတွေ့ရှိချက်များနှင့်အတူဆုံ ... ။ "
BANCA နှင့်သူမ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်ရေးရန်: "ကျနော်တို့ဖြစ်ပါသည်စမ်းသပ်မှုတွေအဘယ်အရာကိုပြသ [မကြာခဏ] ... [လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ] အသစ်အဆန်း-ရှာ, အေးစက်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုဖို့လေ့ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာကြောင်း, ဆေးခန်းလေ့လာသည်။ "
ယင်းမက်စ် Planck အင်စတီကျု၏ဆီမှKühnနှင့်မေတ္တာတရားကိုတက္ကသိုလ်မှစိတ်ရောဂါကုသမှုနှင့် Psychotherapy များအတွက်ဆေးခန်းများ၏Jürgen Gallinat အားဖြင့်ဘာလင်ကောက်ယူသည်အခြားသုတေသန, အောက်ပါတွေ့ရှိချက်နှင့်အတူအနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားသောလမ်းအတွက်ဦးနှောက်အပေါ်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုများ၏သက်ရောက်မှုများကြည့်ရှု:
တိုးမြှင့် porn ကြည့်တိုက်ရိုက်ဆုလာဘ် circuitry အမျိုးမျိုးကြောင့်ဦးနှောက်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းထဲမှာမီးခိုးရောင်အမှု၌လျှော့ချဆက်နွယ်နေကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်ကတော့, ဦးနှောက်ရဲ့ဆုလာဘ် circuitry တစ်ဦးထုံပျော်မွေ့တုံ့ပြန်ရရှိလာတဲ့, compulsive porn အသုံးပြုမှုနှင့်အတူနှေးကွေးကြီးထွားလာ - ဆိုလိုသည်မှာ desensitization ။
တိုးမြှင့် porn အသုံးပြုမှုဆက်နွယ်နေကြောင်းသည် prefrontal cortex နဲ့အကျိုးကို circuitry အကြား functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုလျော့နည်းသွားသည်။
သူတို့ရဲ့လေ့လာမှု, Kühnနှင့် Gallinat ရေးအကြောင်း: "ဒါကညစ်ညမ်းပုံမှန်စားသုံးမှုထက်ပိုသို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းသင်တို့၏အကျိုးစနစ်ကထွက်ကျီကိုဆိုလိုနိုင်ဘူး။ ... ကျနော်တို့ကမြင့်မားတဲ့ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့်အတူဘာသာရပ်များဆုလာဘ်၏တူညီသောငွေပမာဏကိုလက်ခံရရှိရန်တိုးပွားလာဆွလိုအပ်တယ်လို့ထင်မြင်ယူဆပါတယ်။ ... ဒီ circuitry ၏အလုပ်မဖြစ် [လည်း] မသက်ဆိုင်အလားအလာအနုတ်လက္ခဏာရလဒ်၏, ထိုကဲ့သို့သောမူးယစ်ဆေးရှာအဖြစ်မသင့်လျော်အပြုအမူရွေးချယ်မှု, ဆက်စပ်သောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ "အမှန်ကတော့, Kühnနှင့် Gallinat သောဆုလာဘ် circuitry ၏တူညီသော desensitization (နှင့်တင်းမာမှုတုံ့ပြန်မှု) ကိုဆွေးနွေးနေကြတယ် ကျွန်တော်ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲလမ်းနှင့်အခြားစွဲလမ်းအပြုအမူတွေနှင့်အတူကြည့်ရှုပါ။
ဒါကြောင့်လိင်စွဲဝေဖန်သူများအဘို့မေးခွန်း - သူတို့မည်သူမဆိုမေးရန်မလိုချင်ကြဘူးသောမေးခွန်းတစ်ခုကို - ဤသည်ကားသင်မည်သို့ဤအစွဲနှင့်ဆက်စပ်သောဦးနှောက်ပြောင်းလဲမှုများကိုရှင်းပြသလဲ? ဒီစွဲမပါရှိလျှင်, ကဘာလဲ?
ဒီကိစ္စကို၏ရိုးရှင်းအမှန်တရားနောက်ဆုံးပေါ် High-end သုတေသနအားလုံးပစ္စည်းဥစ္စာစွဲနှင့်အခြားအမူအကျင့်စွဲလမ်းနှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ aligns သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ရုံဆန့်ကျင်ဖို့ညွှန်ပြဆိုယုံကြည်သုတေသနမရှိပါ။ ဟုတ်ကဲ့ကျနော်တို့ကိုကြိုက်လိမ့်မယ်ထက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲမှာရှာဖွေနေနည်းပါးလာလေ့လာမှုများရှိပါသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှု, compulsive လောင်းကစားဝိုင်း, Bing စားနှင့်အခြားအပြုအမူစှဲအပေါ်ရှိသည်သောလေ့လာမှုများ၏ရာပေါင်းများစွာနှင့်အတူဿုံ align သောလေ့လာမှုများ။
ရုံစွဲသီအိုရီသကဲ့သို့ကောင်းစွာကိုက်ညီသည့်အခြားရွေးချယ်စရာသီအိုရီမရှိ။ တချို့က "။ မြင့်မားသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ" အဖြစ်လိင်စွဲရှင်းပြဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါပြီသို့သော်မြင့်မားသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒကျနော်တို့လုပ်ပြီးကမြင်းနေကြတယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ clients များအတွက်မြင်သောအာရုံကြောအပြောင်းအလဲများကိုအမျိုးအစားများများအတွက်အကောင့်မထားဘူး။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာလိင်စွဲမော်ဒယ်၏ဝေဖန်သူများကသူတို့ကိုရှေးရိုးစွဲ Morales တောင်းဆိုဖြင့်အသုံးချသူ Clinician တိုကျခိုကျဖို့ရွေးချယ်ပါ။ ဒါကြောင့်သူတို့တစ်တွေအလွန်မှန်ကန်ရောဂါ minimize လုပ်နေတာပါ။ ကံမကောင်းစွာပဲ, ဒီထပ်မံရဲ့သားကောင်နှင့်ပြီးသားလုံးဝလွဲခံစားရနှင့်ကုသမှုရှာတွန့်ဆုတ်တဲ့သူတစ်ဦးချင်းစီ၏အုပ်စုတစုအထီးကျန်။